सेन्ट पीटर्सबर्ग - ठूलो शहर, एक रोचक इतिहास र ऐतिहासिक साइटहरू, विश्वभरिबाट पर्यटकहरु द्वारा भ्रमण छन् जो संग। यी सबै आकर्षण रोमान्टिक, स्वादिष्ट खाने को विचार evoke। राम्रो खाना र आरामदायक वातावरण संग जो संस्थाले तपाईं एक साँझ खर्च गर्न सक्छन्? रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" - धेरै ठूलो ठाउँ तिनीहरूलाई एक हो, र। यो संस्थाले असामान्य भित्री, प्रमुख स्थान र उत्कृष्ट भोजन प्रतिष्ठित छ।
यो सुविधाजनक स्थान
उहाँले बस्ने पुरानो टुकडी, मा, , Shuvalov गणना 150 वर्ष पहिले, व्यापार केन्द्र Quattro Corti स्थित। आफ्नो अन्तिम तल्ला रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" कब्जा गरिएको छ। को मिलान स्टुडियो को वास्तुकला व्यापार केन्द्र, "बुइगल" को निर्माता भएको छ जो डिजाइन गरिएको थियो। यसलाई पूर्ण आधुनिक सामाग्री अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको, र एक, सुखद आरामदायक र सहज वातावरण जोडती। सजावट लागि सजावट मात्र प्राकृतिक सामाग्री को लागि प्रयोग। कटलरी, सजावटी वस्तुहरू, आदि: एकै समयमा चित्र प्राचीन विशेषताहरु पूरा को "पेन्टहाउस" कहाँ छ? ठेगाना मा रेस्टुरेन्ट: सेन्ट पीटर्सबर्ग, उल। Pochtamtskaya, डी। 3, et.6, सबै palates थाह।
रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" यसको आगंतुकों शहरमा ऐतिहासिक स्थलहरू को एक महान दृश्य प्रदान गर्दछ। यो हाल पटक को सबै भन्दा राम्रो वास्तु परियोजनाहरूको एक सकिन्छ। लगभग सम्पूर्ण रूपमा रेस्टुरेन्टको पारदर्शी पर्खाल अधिकतम दृश्यात्मक प्रदान गर्नुहोस्। मा गिरजाघर को सुनको domes को आगंतुकों दृश्य सेन्ट इसहाकको वर्ग। पाहुनाहरूको अघि सेन्ट पीटर्सबर्ग, को घरहरू अनन्त छतहरुको शहर र आधुनिक व्यापार केन्द्र को सौन्दर्य को एक अद्भुत परिदृश्य प्रस्तुत। शहर को सबै सौन्दर्य, आधुनिक गर्न शास्त्रीय देखि, पर्यटकहरू अगाडि देखिन्छन्।
त्यो रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" प्रदान गर्दछ? यो संस्थाले धेरै विविध मेनु छ। पर्यटकहरू परम्परागत, क्लासिक देखि चयन गर्न सक्नुहुन्छ युरोपेली भोजन वा एशियाली व्यञ्जन। रेस्टुरेन्ट पनि अतिथि प्रस्ताव रचनात्मक भोजन रेस्टुरेन्ट विश्वभरिबाट शेफ अक्सर यात्रा। मेनु प्रसिद्ध शेफ यो दिन गर्न "बुइगल" को पर्खालहरु मा पाक masterpieces सिर्जना जो Maximilian र अलेक्जेन्डर Atsori Belkovich, विकास गरे। भाँडा दायरा निरन्तर नयाँ पाक रुझान संग अद्यावधिक गरिएको छ।
"बुइगल" रेस्टुरेन्ट तीन हल, 180 मान्छे प्रत्येक लाग्न तयार छ। प्रत्येक कोठा गैर-धूम्रपान आगंतुकों लागि क्षेत्र छ। यो परिवार रात्रिभोज, साथीहरू, उत्सव, कर्पोरेट banquets, व्यापार सभा र भेटघाट संग सभाहरू लागि एक आदर्श ठाँउ हो। रेस्टुरेन्ट यो व्यापार सभाहरूमा लागि सुविधाजनक बनाउने, छ नि: शुल्क वाइफाइ। "बुइगल" - रेस्टुरा जसको मूल्य आनंद से आश्चर्य हुनेछ। औसत खाने लागत प्रत्येक आगन्तुक 2-3 हजार rubles छ। यो सबै चयन भोजन र अतिरिक्त सेवाहरू निर्भर गर्दछ। Fourchette प्रति व्यक्ति 1,200 rubles देखि खर्च हुनेछ। चलानीहरू भुक्तानी गर्न सकिन्छ नगद वा प्लास्टिक कार्ड मा त।
"बुइगल" - रेस्टुरा (सेन्ट पीटर्सबर्ग), आगंतुकों एक बार र वाइन सूची प्रदान गर्दछ। पेय को दायरा विश्व-वर्ग सुविधाहरु को स्तर पारस्परिक, र हरेक अतिथि हरेक स्वाद को लागि रक्सी चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेस्टुरेन्ट मेनु ग्रिल मा छोटो समयको लागि पकाएको छन् व्यञ्जन समावेश छ। पर्यटकहरू अनुरोध मा एक हुक्का प्रदान गर्न सकिन्छ। सानो ग्राहकहरु विशेष छोराछोरीको कुर्सियों भेटी लागि। रेस्टुरेन्ट एक आउटडोर छ गर्मी छत, सुन्दर मौसम र ताजा हावा आनन्द लिई रहनुभएको बेलामा तपाईं कहाँ स्वादिष्ट नाश्ता आनन्द उठाउन सक्छौं। अनुरोध मा, एक takeaway प्रदान।
सांगीतिक साथमा जाने वस्तु सधैं कुनै पनि समयमा वर्तमान छ। रेस्टुरेन्ट को चरण मा नियमित गर्ने सबै भन्दा राम्रो हिट प्रदर्शन प्रसिद्ध कलाकार हुन्। संगीत को विधा धेरै, विविध ज्याज देखि फ्रैंक गर्न लिएर। तपाईं सांगीतिक साथमा जाने वस्तु लागि आफ्नो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट ठूलो ध्वनि र प्रकाश उपकरण, एक शुल्क लागि प्रदान गरिएको छ जो (प्रति रात 5000 rubles) छ। एउटै रकम लागि स्लाइडशोहरू, फोटो र भिडियो को लागि एक प्रक्षेपण स्क्रिन भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट एक मधुरो सिस्टम हल छ। एयर कंडीशनर को उपलब्धता।
सिजन smelt को
रेस्टुरेन्ट नियमित घटनाहरु र गतिविधिहरु होस्ट। वसन्त सिजन को सुरुमा परंपरागत smelt मानिन्छ। अतिथिहरूको ताजा माछा आनन्द उठाउन सक्छौं। सामाग्री को रोचक र असामान्य संयोजन यो व्यञ्जन। यदि असम्भव छैन, यो परम्परागत को महाराज देखि माछा को यस क्षेत्रको लागि तयार गर्न सकिन्छ कति भाँडा कल्पना गर्न। Smelt यो एक अद्वितीय स्वाद दिनको सामाग्री को एक किसिम संग सेवा गरे। यसलाई पूर्णतया माछा व्यञ्जन रमाइलो गर्न यो सिजन मा रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" भ्रमण गर्न आवश्यक छ।
हरेक बिहीबार रेस्टुरेन्ट सबै भन्दा राम्रो माछा व्यञ्जन स्वाद Gourmets निम्तो दिनुहुन्छ। आफ्नो तयारी लागि मात्र ताजी र समुद्री व्यञ्जनहरु प्रयोग गर्दछ। एशियाली र युरोपेली भोजन को सबै पाक Delights आगंतुकों एक महाराज प्रदान गर्दछ। अतिथि लागि खाना, आफ्नो संरचना र तयारी प्रविधि बारे उपलब्ध पूर्ण जानकारी छ। तपाईं सुन्दर वातावरण रमाइलो लिन, रेस्टुरेन्ट मा व्यञ्जनहरु प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, वा आदेश लिन-बाहिर। पर्खने समय लामो पछिल्लो छैन, र यो ठीक संगीत र आरामदायक भित्री अप रोशन हुनेछ। सुन्दर फिड, सिद्ध स्वाद र रक्सी को रूप मा सही पूरक सबैभन्दा मांग ग्राहकहरु पनि indifferent नछोड।
बिना रक्सी कुनै पनि खाने गर्दैन, आफ्नो मनसाय बिना। यो महान पेय यसको खुशबू, भव्य र वैविध्यपूर्ण फूलगुच्छा संग Beckons। प्रत्येक पकवान जो बन्द सेट गरिनेछ रक्सी को एक किसिम, पेश र पूर्ण यसलाई पूरक गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक बुधवार "बुइगल" रेस्टुरेन्ट यसको आगंतुकों पेय पदार्थ को एक अविश्वसनीय विविधता प्रदान गर्दछ। यहाँ, समीक्षा गरेर न्याय, उत्कृष्ट रक्सी उत्पादकहरु विश्वभरिबाट संकलन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले नातेदार indescribable खुशी ल्याउन स्वाद गर्न सक्छन् र किन्न। हरेक रेस्टुरेन्ट यस्तो विविधता र विविधता घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
Lent समयमा "बुइगल" रेस्टुरेन्टमा Lenten मेनु प्रदान गर्दछ। कुक व्यञ्जन आध्यात्मिक शुद्धीकरण र संवर्धन को यो समय फिट कि विश्वभरिबाट भेला भए। यहाँ तपाईँले एकै समयमा, स्वादिष्ट पौष्टिक र meatless व्यञ्जन नमूना गर्न सक्नुहुन्छ। मेनु यो अवधिमा धेरै वैविध्यपूर्ण छ। स्थापना हरेक स्वाद को लागि व्यञ्जन प्रदान गर्दछ। तसर्थ, रेस्टुरेन्ट "पेन्टहाउस" Gourmets द्वारा बेशकीमती। यसको बारेमा समीक्षा नै को लागि कुरा। कम्तिमा एक पटक उहाँलाई भ्रमण गर्नेहरूले, म सुखद वातावरण र स्वादिष्ट भोजन रमाइलो गर्न फेरि फेरि आउन र गर्न चाहन्छु।
एक आराम ब्रेक लागि राम्रो रेस्टुरेन्ट छनौट लागि नियम
सजिलो सूप नुस्खा बीफ
अफगानिस्तानको मुद्रा: मौद्रिक इकाईको इतिहास। मुद्राको बारेमा उत्सुक जानकारी
कसरी सही र स्वादिष्ट सूप खाना पकाउनु
MFI "FGDA": ग्राहक समीक्षा
को न्यानो कंबल के हुन्? न्यानो कम्बल कसरी चयन गर्ने?
Dotvork टाटु (स्केचहरू)
Le Pacha Resort होटल (le Pacha) 4: * समीक्षा
विश्व रूख - सबै दुनिया को आधार
आत्म-रक्षा को लागि चक्कु तह: कसरी चयन गर्ने?